စောက်ချိုးတွေ ပြင်၊ ဒါပဲ – Yahoo, Google Mail Groups conversation. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » စောက်ချိုးတွေ ပြင်၊ ဒါပဲ – Yahoo, Google Mail Groups conversation.
စောက်ချိုးတွေ ပြင်၊ ဒါပဲ – Yahoo, Google Mail Groups conversation.
Posted by kai on Jul 31, 2011 in Critic, Politics, Issues | 25 comments
အောက်ကအီးမေးလ်နဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးထားတာတွေကို.. မေးလ်ဂရုကနေ ကူးယူပါတယ်..။
အားလုံးက မေးလိဂရုဆွေးနွေးတဲ့အထဲတင်ကြတာမို့ .. လူသူအဖတ်များစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိမှာပဲယူဆပြီး ဒီမှာကူးတင်ပါတယ်..။ မြန်မာပြည်ပြင်ပက နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကတော့ ဖတ်ပြီးနေကြလောက်ပေမဲ့. ပြည်တွင်းက စိတ်ဝင်စားသူမြန်မာများ ဖတ်စေချင်လို့ပါ။
မီဒီယာအနေနဲ့ မှတ်တမ်းကျန်ရစ်အောင် ထားတာဖြစ်ပြီး အားလုံးဟာ ဆွေးနွေးရေးသားသူများရဲ့ အာဘော်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောထားပါရစေ..။
ရက်နာရီအလိုက် ပြန်စာတွေပါဖော်ပြပေးထားပြီး.. အသစ်ထပ်တက်လာတာတွေလည်း အခြေအနေပေးရင် ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်..။
date Fri, Jul 29, 2011 at 5:29 PM
Celebrity လို့ပြောရင် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကို အဓိကခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်း Celebrity လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ လည်း စလစ်ဘရစ်တီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ကမ္ဘာ့အလည်မှာ စလစ်ဘရစ်တီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်နဲနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုတော
့ စလစ်ဘရစ်တီ စာရင်းထဲ ထည့်လို့မရပါ။ သူတို့ကိုတော့ နာမည်ကြီး သူခိုးစာရင်း၊ လူဆိုးစာရင်းထဲမှာတော့ ထည့်ပါတယ်။ တာလီဘန်အဖွဲ့လိုမျိုးနဲ့ တန်းတူ ထားလို့ရပါတယ်။နာမည်ကြီးတွေကို ထမင်းကျွေးတဲ့လူ
date Fri, Jul 29, 2011 at 7:03 PM
နိုင်ငံရေးကိစ္စ ကို ဝေဖန်ခြင်း ရေးသားခြင်းကို လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခြင်း ရေးသားခြင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းကို
နိုင်ငံကြီးသား ပြီသစွာ ယဉ်ကျေးစွာ အများအား မထိခိုက်စေသော နည်းဖြင့် လူတိုင်းမှာ
တာဝန်တရပ်အနေနှင့်ရေးနိုင်ပြောနိုင်သော လူ့ အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးရှိသော ဥပဒေရှိသော နိုင်ငံအများမှာ သူ့တိုင်းပြည် သူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သူ
အထူးသဖြင့် ရှေ့ပဝေသဏီ ကထဲမှာ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် ဆိုသော ဘုရင် ဆိုသော
အုပ်ချုပ်မှု အထိပ်အခေါင် တွေသည်ပင်။ ယခုကာလ အထိ အ ချို့ နိုင်ငံများမှာ ရှိနေတုံးပါဘဲ
ဘုန်းကျော် -အဆိုအရ သြစတေးလျား-နိုင်ငံမှနေသော မြန်မာနိုင်ငံသား ပအို လူမျိုးလို့ဆိုပါတယ်။ ပအိုလူမျိုးများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဝါဒကို မွန်လူမျိုး များနည်းတူ
များစွာ ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းကြပါတယ်။ ဂါရ၀ တရား နိဝါတ တရားတို့ကို အားထားပြီး လောဘ
နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် သတ်သတ်လွတ် ဆိုသော အသက်မပါ သော အဟာရ ကို မှီဝဲ
တတ်ကြပြီး ၀ါတွင်းသုံးလ ဆိုလျှင် ဘုရားကျောင်းသွားပြီး ငါးပါးသီလ ဆယ်ပါးသီလ တို့ကို
စောင့်ထိမ်းကြပါတယ်။သထုံခရိုင်တွင် အလံတရာ စေတီတော်ကြီးကို ပအိုလူမျိုးများ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘုရားဝေယျာဝစ္စ လုပ်ကြရင်း အသက်ပေးသွားသူများပင်ရှိပါတယ်။
လူဖြစ်လာလျှင် ဘာသာ သာသနာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံကို ယူတတ်ကြပါတယ်
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု ကို မပြစ်ကြဘဲ အမြဲပွဲလမ်းများ ကိုပြုလုပ်ကြတယ်
အကြောင်းမှာ နောက်လာ နောင်သားသမီးများ ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်ဆုံးသွားဘဲ ရှိုင်းစိုင်းသော အဖြစ်သို့ မရောက်စေဖို့ပါဘဲ။
ဘုန်းကျော် နိုင်ငံရေး စာပေများ ဝေဖန်ရေးသား ခြင်းကို အကြောင်းမဆိုးဘဲ
ဝေ-ဖန်သူ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါ။ အခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုသော
စကားသည် မွန်မြတ်သော အထွဋ် အထိပ်ထားသော ပညတ်ချက်တခုပါ။ဘသာသနာ
နှင့် ထိခိုက်လာသည့်အတွက် ယခုလို ဝေဖန်လိုက်ရတယ်။ နားလည်အောင်လည်း
ရဟန်းဟု ခေါ်သော သံဃာများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ငါးရာ
ငါးဆယ်လေး (၂၅၅၄) နှစ် ထဲက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည် ။ ရှင်ဘုရင် ဆိုသည်မှာ တခေတ်
တချိုန် တခါ တွင် သမိုင်းအရ ပေါ်ပေါပ်ခဲ့တယ်။ ၀ါဒ ရေးရာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများဟာ
လည်း လောကီရေး အရ သူ့အတိုင်းအတာ အချိန်အခါ များမှာ ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်။
ပြည်သူတွေနှင့် ပါတ်သက်ပြီး လူသားများဟာလည်း သူ့ဓလေ့ထုံးစံ အယူဝါဒ အပေါ်
အားထားရာ ကိုးကွယ်ရာကို အစိုးရ အုပ်ချုပ်သူ များအဖြစ်ရွေးခြယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေး သည်လောကီရေးတွင် မပါဘဲစိတ်ပိုင်းးဆိုင်ရာ ကိုးစားခြင်း ယုံကြည်ခြင်း အဆုံးအမ ခံခြင်းဆိုသော -ဂါရ၀တရား နိဝါတ တရားအဖြစ် လက်ခံကြတယ်။
လောကီ လောကုတ်တရာ ကို ဘာမှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မသိဘဲ ။ မိမိမျိုးရိုး ဗီဇ
ကို အသိအမှတ်မပြု တဦးထဲ တယောက်ထဲ ပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် မနေဘဲ -အထီးကျန် လူမျိုး
တယောက်က -ဘယ်သူကိုမှ ဂရု မထားဘဲ ပြောလိုရာ ပြော။ ဆိုလိုရာ ဆိုနိုင်ပါတယ်
အခု ဘုန်းကျော်တယောက် ဘယ်အခြေအနေမှာ ရောက်နေပြီး ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ဟာ
ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ သိရဲ့လား။ သိအောင်လည်း ကျိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးလိုရေး ပြောခြင်ရာ ပြောပြီး အများဆိုသော ပရ ဆိုင်ရာ တရားဖြစ်
သော ကောင်းသော နိုင်ငံရေး ရာနှင့် မတူဘဲ -တိုင်းပြည်လူမျိုး ယဉ်ကျေး မှု တို့ကိုပါ
ဖျက်စီးနေသူ တယောက်အနေနှင့် မဖြစ်စေလိုပါ။
အခု လိုရေးသား အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းကိုလည်း သီးခံနိုင်ပါစေ။
သီးခံခြင်းဆိုတာ ခန္တီပါရမီ လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ပရမီ ဆယ်ပါး ဟာ သံဃာများ
ပေါ်ပေါက်ရန် နှင့်ဗုဒ္ဓ သာသနာ ရှည်ကြာ စေရေးအတွက် ဘုရားရှင်က ဟောကြား
ထားသော အမှာစကားတရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းသောစရိုက်နှင့် သိမ်မွေ့သော အလုပ်များလုပ်နိုင်ပြီး မောင်ဘုန်းကျော် တယောက် ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေ——-
date Sat, Jul 30, 2011 at 10:00 AM
Re: စောက်ချိုးတွေပြင်ကြ – ဒါဘဲကိုဘုန်းကျော်
ခင်ဗျားတွေးတာ ရေးတာတွေကို – အားလုံးမဟုတ်တောင် – အားလုံးနီးပါး ကိုကြိုက်တယ် လက်ခံတယ်
ကျနော်ဟာ ခင်ဗျားလို မြင်ပေမဲ့ ခင်ဗျားလောက်ကိုမရေးရဲဘူး။
ကျနော့်လို ပွင်းပွင့်လင်းလင်းမထောက်ခံပေမဲ့ ခင်ဗျားတွေးတာတွေ – ရေးတာတွေအပေါ် ကျနော်နဲ့ အမြင်တူတဲ့ လူတွေရှိပါတယ်။
ဒီစကားမျိုးတွေ ဒီမေးခွန်းမျိုးတွေက ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို လုံးဝ လုံးဝ ”စောက်ဂရုမစိုက်”တဲ့ လူတွေမှ မေးရဲတာ ပြောရဲတာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ” စောက်ကျင့်” တွေပြင်ကြလို့ ပြောခဲ့တယ်။
ခင်ဗျားက စောက်ချိုးတွေပြင်ကြ – ဒါဘဲ လို့ ပြောတယ် ။
သုံးတဲ့စကားလုံးတွကရိုင်းပေမဲ့ – တချို့ ကရိုင်းရိုင်းပြောမှ မှတ်မိတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ချက်ချခဲ့တာဘဲ
တကယ်တော့ ကျုပ်တို့ အားလုံးဟာ – (မူးပြီးအသားလွတ်ဆဲတာကလွဲရင်) ရိုင်းရိုင်းပြောမှတန်ကာကျမဲ့ အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ
သီပေါမင်း ပါတော်မူသွားတဲ့နောက် – မချိတင်ကဲဖြစ်ကြရတာကို
ဆီးဘန်းနီဆရာတော်က – သေသော်မှတည့် သြော်ကောင်း၏ လို့သူ့ ခေတ်လူတွေကို – ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး – အပြစ်တင်တယ်
အချုပ်တန်းဆရာဖေကတော့ – “ဗမာ ဗမာချင်းကြွားကြချင် – ကုလားမြင် သူ့အမေလိုးတော့မလိုပ – ခုမြေလျှိုးပုန်းရှောင်” လို့ 
ခပ်ရိုင်းရိုင်းဘဲရေးခဲ့တယ်။ သမိုင်းက သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုလက်ခံတယ် – ဆရာဖေကို သူရေးတာတွေရိုင်းတယ်ဆိုပီးမပစ်ပါယ်ကြပါဘူး
သူလဲပဲမျိုးချစ်စာဆိုတစ်ဦးအဖြစ် တင်ကျန်ရစ်တာဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ စကားလုံးတွေကအဓိကမကျဘဲ စေတနာကအဓိကကျလို့ ပဲ
အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၀င်ငွေ ကိုမေးလိုက်တာ သူတော့မသိဘူး ကျနော်တော့ ” ဖြုံ ” သွားတယ်။
ဒီမေးခွန်းကိုတနေ့ ကျယင် ကျိမ်းသေ သူ ဖြေရမှာကိုး – Transparency လေ။ သူ့ ကိုယ်ကြည်ညို လို့ပုဂ္ဂလိကထားလှုတဲ့ငွေတွေ
ဆုတွေဆိုယင်တောင် နောင်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ အခွန်ကောက်ခွင့်ရှိမရှိ (whether subject to taxation) ဆိုတဲ့ question တက်လာမယ်လေ။ အခုအစိုးရကတော့အဲဒါကို ထိရဲဦးမယ်မထင်ဘူး။
ဘုန်းကြီးဦးရေကိုဝေဘန်တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လဲ ခင်ဗျားမမှားဘူး
အဲဒီအချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်သတိပြုမိလို့သီတဂူဆရာတော်ကြီးကသူဟောတဲ့ မေတ္တာသုတ် တရားတော်မှာ
“တိုင်းပြည့်ထမင်းကိုအချီးနှီး စားမနေမိကြအောင်” သူ့ လူတွေကိုသတိပေးထားတာပါ ပါတယ် – “သူက ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရနဲ့ နေကြ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ (အနည်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူထုရဲ့) မဟာရဌဂုရု ပဲ။
ဦးသိန်းဖေမြင့်က – သူ့ ခေတ်က “ဆော်ဖန်” ဓမ္မကထိကတွေ/ဆရာတော် တွေကိုမျက်စေ့နောက်လို့“တက်ဘုန်းကြီး” ၀တ္တု ရေးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားပြောတာကသူ့ လောက်တောင် မဟုတ်သေးဘူး။ အဲဒီတုံးက သိန်းဖေမြင့်ကို ဘုန်းကြီးတွေက “၀ိုင်းသမ” ခဲ့ကြပေမဲ့ သမိုင်းမှာ သိန်းဖေမြင့်ဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတစ်ခုကိုလက်မတွန့် ခဲ့ဘူးဆိုတာအခုတော့မြင်နေကြပီ။
“မဟာအ၀ီစီ ငရဲဆိုတာ ရှင်ဘုရင်နဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ထားတာကွ – သာမန်လူတွေသိပ်ကျလေ့မရှိဘူး” လို့ 
အခုမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့ကျနော့်အဖေကပြောဘူးတယ်။ သူဟာ မိုးကုတ်ဝိပဿနာယောဂီတစ်ဦးပါ။
“ဘာဖြစ်လို့ လဲဗျ” လို့ ကျနော်ကပြန်မေးတော့ – သူက ” ဟ – ဘာဖြစ်ရမလဲကွ ရှင်ဘုရှင်နဲ့ ဘုန်းကြီး ဆိုတာ လူတွေလုပ်စာကိုဖူးပေ့ ညွန့် ပေ့ဆိုတာတွေစားနေပီး လူတွေအထက်ကနေ လူတွေကိုခိုင်းနေ ဆရာလုပ်နေတာ သူတို့ မှားယင် တိုင်းပြည်ပါ ငါးပါးမှောက်တော့တာကိုး” လို့ ပြောပါတယ်။
အခုခင်ဗျားရေးတာ ဘုရားအလိုနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်၊ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က အသင့်ရှိနေပြီးတာတွေကိုတန်းလက်မခံဘဲ
အရာရာကိုစစ်ကြောစီစစ်ကြည့်ဖို့ ခွင့်ပေးခဲ့တာဘဲ။ သူ့ ခေတ်မှာအသင့်ရှိပြီးသားတွေကိုတန်းလက်ခံယင်သူ ဘယ်လာ ‘ဗုဒ္ဓ’ ဖြစ်မလဲ။
တကယ်တော့ဗျာကျနော်တို့ ခေတ် ပြဿနာအားလုံးရဲ့ အဓိကဇစ်မြစ်က အာဏာရှင်စံနစ်ပါဘဲ
တိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်နေတာတရားမ၀င်ဘူးလို့အားလုံးက မြင်နေကြတဲ့အခါ
သူ့ ကိုတိုက်နေတဲ့လူတွေ ‘အားလုံး’ ၊ လုပ်နေကြတဲ့ ‘အလုပ်တွေအားလုံးဟာ’ အလိုလို အော်တိုမက်တစ် ‘တရားဝင်’သလိုလိုဖြစ်ကုန်ကြတာကိုး
တကယ်တော့ သူ့ ကိုတိုက်နေကြတဲ့ “ဘက်” မှာလဲ အုပ်အရောရောကျောက်အရောရော နဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာကို
ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိ မျက်နှာလွှဲနေ ကြ ခွင့်လွှတ်ပေးနေခဲ့ကြသလဲ
စစ်အစိုးရကိုတိုက်ရင်ပီင်္းရော ဘာပဲလုပ်လုပ်ခွင့်လွှတ်ပေးထားကြတာ ကြာပီလေ – အခုအဲဒါကိုခင်ဗျားကသန့် စင်ရေး လုပ်ချင် တော့ခင်ဗျားကို ပြဿနာကောင်လို့ အော်မှာပေါ့။
ခင်ဗျားကိုမြှောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ဒီစာမျိုးမရေးဘူးပါဘူး။
ရေးရတဲ့အကြောင်းက ခင်ဗျားကိုဝိုင်းပြောကြတဲ့ လူတွေများလာယင်ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျားနဲနဲ လက်တွန့် သွားမှာစိုးလို့ ပါ။
အခုအချိန်မှာ ဒီလို -” ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဘန်ရေး” တွေလိုနေပီ။ နောက်တောင်ကျနေသေးတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာရေးတဲ့စာတိုင်းကိုလူတွေကမဖတ်ကြပါဘူး၊ သူသူ ကိုယ်ကိုယ် လုပ်တတ်ကြတာက အမှိုက်သရိုက် (garbage) လို့ ကိုယ်ယူဆတဲ့သူရဲ့ မေးလ်ဆိုယင်တန်း delete လုပ်ပြစ်ကြတာပါဘဲ။
ကျနော်အဲဒီလို တန်းပီး delete လုပ်တဲ့ လူတွေရဲ့စာရင်းမှာ ခင်ဗျားရယ် ၊ နေမျိုးဝေရယ် ၊ အောင်မျိုးထွန်းရယ်မပါဘူး။
သဘောတူတာ မတူတာ ထား ဖတ်ဖြစ်အောင်တော့ဖတ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ မှာပရိဿပ်ရှိနေပီ။
ခင်ဗျားတို့ သုံးဦးဟာတကယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့လမ်းဖေါက်ပေးမှုကတကယ့်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုပေါ်လာစေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
date Sat, Jul 30, 2011 at 11:05 AM
ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘုရား တရား သံဃာ ဂုဏ်ကျေးဇူး
အကြောင်းရေးထားတဲ့ မဟာဂန္ဓရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့
ကျွန်တော်လဲ သံသရာမှလွတ်မြောက်ဖို့ 
သူဘယ်လို လေ့ လာတယ် အကြောင်းအကျိုး
ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးမရမ်းကြပါနဲ့ လို့ မေတ္တာရပ်ခံ
Wishing you have peace of mind,
FWUBC-Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizens (in Japan)
date Sat, Jul 30, 2011 at 1:39 PM
မြင့်ဆွေတွေက သုံးယောက်တောင်ရှိနေတယ်။ နအဖ အကျိုးလိုပြီး ဆောင်းပါးရေးနေတဲ့ ငါးမြင့်ဆွေ။ အိန္ဒိယ အင်အယ်ဒီ မှာ ငွေရေး ကြေးရေး ပြဿနာကြောင့်
ပြုတ်သွားတဲ့ မြင့်ဆွေ-မဆလ အဟောင်း မြန်မာ့သံတောဆင့်က အလံနီတပြည့် မြင့်ဆွေ
ဆိုတာကို ကြားဖူးတာပါဘဲ လူခြင်းတော့မသိပါဘူး။
နိုင်ေံရေးလုပ်နေသူတွေဆိုတော့ နိုင်ငံရေးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ကို နားလည်သင့်တယ်
လို့ယူဆပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို မကြိုက်လို့ တော်လှန်နေတာသိ၍ ချီးကြူးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ တနည်းနည်းနှင့် စစ်အာဏာရှင်စံနစ် အမြစ်တွယ်ရန်၎င်း။ သွယ်ဝိုက်သောနည်းနှင့်
စစ်အာဏာရှင်တည်မြဲရေး အထောက်အကူပြုသော ပရိယယ်ဖြင့် စစ်အာဏာတော်လှန်သူ
အထဲ သွေးခွဲသော လူမျိုးရေးပတိပက္ခဖြစ်စေရေး ဘာသာရေး ကိစ္စ ၀င်ရောက်လှုပ်ဆော်
ပေးခြင်းများ စသည်တို့ကို ပညာသားပါပါ ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ လူမိုက်ငှား ခေါင်းရိုက်
ခိုင်းတဲ့ အကျင့်မျိုး လက်ဝဲရူးခဲ့သူများပြီပြီး ဘာသာရေးဆန့်ကျင်မှု လုပ်ခြင်းတို့ပါဘဲ။
သမိုင်းရာဇ၀င် အထောက်အထားနှင့်ဘာတွေပြောနေနေ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများ
ဘုရင်စံနစ်ဖြစ်စေ လက်ရှိအာဏာရှင်တွေဖြစ်စေ သာသနာ ရေးနှင့် ဘာသာရေးအား ၀င်စွက်
ပြီး လုပ်ခြင်တိုင်း လုပ်၍မရကြပါ။ အုပ်ချုပ်သူ မင်း အစိုးရ များသည် ဓမ္မစက်နှင့် အာဏာစက်
ဆိုသည့် အချက်နှစ်ချက်အရ မင်းကျင့်တရားမညီသော အစိုးရသည် သာသနာသန့်ရှင်းရေး
လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ လုပ်လည်း မလုပ်နိုင်ပါ ။
သံတော်ဆင့် မြင့်ဆွေ ဒီလောက်သတ္တိရှိပြီး သာသနာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက
ပြည်ပရောက်နေလျှင်လည်း မြန်မာဘုန်းကြီးများ အတွက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဇင်းမယ်မှာ လို့ ကြားမိသည် ထိုိင်းထောက်လှန်ရေး ဗိုလ်မှူးများနှင့် ခရီးသွားလာသောအခါ
အကြိုအပို့ လုပ်ဘူးသည်ဟု ထင်ပါသည် များသော အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ့ရေးသမား
အများ နယ်ချားဒေသတွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများအား အားကိုးနေရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာပြည်မှ လာသော ဘုန်းကြီးရဟန်းများစွာရှိနေသည်
ကျူလာလောင်ကောင် သံဃာတက္ကသိုလ် မှာ တတ်ရောက်သင်ကြားနေသော ဘုန်းကြီး
များရှိသည် အားလုံးပတ်စပို့နှင့် လာကြသည် -ဘန်ကောက် ဘန်းခဲ အပိုင် ၀ တလုံးဘုန်းကြီး
ကျောင်းမှာ သံဃာ အပါးတရာ ကျော်ရှိသည်။ မြဘုရား အနီး ၀ပ်မဟာထပ် ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်း အခန်း(၃) တွင်လည်း အမြောက်အများရှိပါသည်။
မြင့်ဆွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေသူဖြစ်နေလျှင် ၄င်းဘုန်းတော်ကြီးများအား
သန့်ရှင်စေလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သာသနာ ကိုသန့်ရှင်းရေး တကယ်မလုပ်လိုဘဲ ဘာသာ
သာသနာ ကို စော်ကားသူ အီမေးလ် အင်တာနက် သတင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
အား စော်ကား မော်ကား လုပ်နေခြင်းကိုတော့ မလိုလားပါ အပြောမဟုတ်ဘဲ တကယ်
လုပ်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမား အစစ်အမှန်သည် အများအကျိုးလိုလားသူ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
စွန့်လွှတ်သူဖြစ်ပါသည်။ အခွင့်ရေးသမား သာပေါင်းညာစား အာဏာရှိသူ၏ သူလျို
များ သည် နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံသမားအစစ်သည် လူမျိုးရေးနှင့်ပါတ်သက်
ပြီး မည့်သည့် လူမျိုးမည်သည့် အဖွဲ့စည်းကိုမှ မစော်ကားပါ။
ဘာသာရေးသည် နိုင်ငံရေး လူမျိုးရေး လောကီရေးတို့ထက် အဆ များစွာ
ကွာခြားပါသည် လူအများစု ယုံကြည်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် ကရင်။မွန်။ရခိုင်။ ပအို မြန်မာ
များ-ထားဝယ်များ။ ရှမ်းများ၏ ကိုးကွယ်လျက်ရှိသော သံဃာ ဂိုဏ်းကို လုံးဝ -အထိခံ
ကြမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား သုံးသန်းနီးပါးရှိနေသည်။ ၀ါတွင်း
သုံးလတွင် -မြန်မာနိုငငံသားများ သိန်းနှင့်ချီပြီး ရဟန်းများအား ကိုးကွယ်အားထား
ဆိုခဲ့ပြီးသော ရဟန်းများမှာ ရာနှင့် ချီပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရပ်တည်
နေနိုင်ခြင်းဟာလည်း ပစ္စည်းလေးပါး တကာ ပြည်သူများ စစ်အာဏာရှင် တို့၏ အနှိပ်
အစက် မခံနိုင်၍ တိုင်းတပါးရောက် ကျွန်ဖြစ်နေသော်လည်း ဘာသာ သာသနာ
မပြစ်နိုင်ကြပါ။ ရဟန်းတို့ သည် ၂၂၇-ပါးသောသိက္ခာ ကိုစောင့်ထိန်းရသည် အနည်း
ဆုံး ဆယ်ပါးသီလ နှင့်ဖြူစင်အောင် နေထိုင်ရသည် ခေါင်းတုန်းပြီး အ၀တ်စဉ်ကျယ်
သင်္ဃန်းဝတ်ပြီး ကာမ ကိုဖြတ်ကာ အရက်သေစာ မူးရစ်ဆေါးး မသုံးဘဲ လူနှင့်
မြင့်ဆွေ ဘုန်းကျော် တို့ ထက် အဆ ရာ ထောင်ချီပြီး မြင့်မြတ်နေကြပါသည်။
မောင်ရင်တို့ က မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ကြည့်ပေါါ့ သူများကိုယ်လည်း ဝေဖန်နိုင်တာဘဲ
ဘုရင် ဆိုသော ဘုန်းကြီးသူများသည် ရှိသည်ကိုလည်း မောင်ရင်တို့
နားမလည်ကြပါ -ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေလျှင်ဘုန်းတန်ခိုး ရှိတာကို မသိ ရင်တော့ ကိုယ်ရင်
တို့လောက်မိုက်မဲ နားမလည်သူ တွေရှိမယ်လို့ မထင်ပါ။ ဇင်းမယ်နေသည်ဖြစ်စေ
ဘန်ကောက်နေသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများ ထိုင်းထောက်လှန်းရေး အမှု
ထမ်းများအား လေးစားရိုသေ ရပါသည် သူထို့က လည်း အကူအညီပေးလေ့ရှိသည်
၄င်းတို့အားမိဘ ဆရာသမားများသဘွံယ် ဆက်ဆ်ံနေတာကို လည်းမြင်တွေ့ရသည်
မြန်မာအစိုးရအား တော်လှန်သူတိုင်း ပြင်ပနိုင်ငံမှာနေခြင်းသည် တရားဝင်ချင်းမဟုတ်
နားလည်မှု နေခြင်းသာဖြစ်သည် ။
ထိုင်းမှာရှိသော ၀န်ကြီးများ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် ဘုရင်၏
သားတော်။ သမီးတော် မြေးတော်တို့အား ပြားပြားဝတ်ပြီး ကန်တော့၇ပါသည်။
မြင့်ဆွေတို့က ထိုင်းဝန်ထမ်းအား မထီမဲ့မြင် ဆက်ဆံ လို့ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ထို့အတူ ဘုန်းရှိသော သူတွေကို မှိုကျိုးမြစ်ကျိုး ပြောနေသူလောက် ဗဟုသုတ
အတွေ့အကြုံ အားနည်းကြောင်း နားလည်မိသည်။
လူတွေ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ အယူအဆ ကိုယ် စော်ကားသူများလောက်
အောက်တန်းကျသူများ နားမလည်သူများသည် သနားစရာကောင်းသော သူများသာဖြစ်သည်
ခတ္တယ သီလ (ဘန်ကောက်)
မြန်မာသံတော်ဆင့်က စစ်တပ်နောက်ဆွဲ ဖော်လံဖား မြင့်ဆွေကလွဲလို့ ကျန်သူများ၏စာများကို ဖတ်ရှုမှတ်သား သွားပါသည်။ သံတော်ဆင့်က မြင့်ဆွေဆိုသူကတော့ အန်အယ်ဒီနဲ့ ဒေါ်စုမုန်းတီးရေးဂွင် မရှိတော့ ဘုန်းကြီးတွေဖက်ကို လိုင်းပြောင်းသွားပါပြီ။ ဒါလည်း ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ရဟန်းသံဃာတွေ ပါဝင်ခဲ့လို့ စရဖထောက်လှမ်းရေးအလိုကျ ရေးပေးရတယ်ထင်ပါရဲ့…။ ကိုယ့်နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ကိုယ် အသက်ရှုစမ်းပါကွယ်….။
” ရဟန်းများမှာ မြင့်ဆွေ ဘုန်းကျော် တို့ ထက် အဆ ရာ ထောင်ချီပြီး မြင့်မြတ်နေကြပါသည် ”
Even though I amaBuddhist, But, I will not agree with it.
Let say, I will pay respect to ရဟန်း (because I am Buddhist),
But အဆ ရာ ထောင်ချီပြီး မြင့်မြတ်နေကြ is exaggerated.
This is one type of discrimination &
I believe “Human are equal before the law”.
We will get & see as our mind can conceive, contemplate and believe.
တစ်ကယ် ကို မျက်စိတွေ ပွင့်သွားတာပဲ
မသိသေးတာတွေ လည်း သိလာရတယ်
အရမ်းကြိုက် တယ်ဗျို့ 
go to (phonekyaw.blogspot.com)
နအဖ အကျိုးလိုလားပြီးဆောင်းပါရေးတာ ငါးမြင့်ဆွေ ဆိုတာရှိသေးလို့ လား
ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ ဖို့အင်္ကျီမှာ စာတွေရေးပြီး စောက်ရူးထတဲ့ ငါးမင်းဆွေ ပဲ သိလို့ 
Admin ကြီးရဲ့ စောက်ချိုးတွေပြင် ဒါပဲ .. မိုက်တယ်ဗျာ
ဝုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ အမြင်ရှင်းသွားခဲ့ရပါတယ် ..
မိုက်တယ်ဗျို့ ..ဒီလိုဘလော့ခ် တွေ ကဖတ်ရခဲတယ်…တင်ပေးတာ ကျေးဇူး ပါ
သောက်ချိုးတွေ ပြင် စောက်ချိုးတွေပြင်နဲ့ ဘယ်လောက်ပဲပြောနေပါစေ အပြောခံရတဲ့သူတွေကလည်း သောက်၈ရုစိုက်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့…။ မင်းတို့ပြောချင်ရာပြော ငါလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ…။ အဲဂလိုသောက်ရှက်မရှိလို့လဲ လုပ်နေကြတာ…။ ဒီတော့ သူတို့ ပြင်တာမပြင်တာထက် သူ့တို့နေရာ ၀င်လာမဲ့သူတွေဟာ ဂျိုကုတ်ရှိရာ ဂျိုကုပ် ထပ်မလာဖို့လိုတယ်..။ လို့ထင်တယ်လေ…။ ဂျိုကုပ်တွေကိုတော့ နွားသတ်ရုံ ပို့လိုက်ကြတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား…။ ဒီလို တွေးစရာ ဆွေးနွေး စရာမျိုးမဖတ်ရတာ 15 ရက်လောက်ရှိသွားပါပြီ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုခိုင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
( ပြည်သူတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အလှူငွေ တစ်ကျပ်လှူတယ်။ အလှူခံတုန်းက ကျောင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီး အလှူခံတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဘုန်းကြီးက ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သူ့ နာမည်နဲ့ အလှူငွေပြန်ထည့်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် လှူဒါန်းသူအားလုံးရဲ့ နာမည်ကို ထည့်သင့်တာပေါ့။ အခုကြတော့ သူကပဲ သူဝင်ငွေနဲ့ လှူသလိုမျိုး နာမည်ကောင်းယူတယ်။ ဒါမကောင်းဘူး။ )
ဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ့်ဘာသာ လောကီနိုင်ငံရေးကို ပြောချင်ပြောပါလား
ဘယ့်နှယ်ကြောင့် လောကုတ္တရာထည်းက ရဟန်းသံဃာရဲ့ အလှူပစ္စည်း စားခြင်းကို ထိပါးရတာလည်း
သဂျီးဘုရား ရွာသားကောင်းမှု့ဆိုတဲ့ ထုံးစံကို မသိခြင်ဟန်ဆောင်နေပြန်ပြီ
ဖိုးသူတော်လောက် ကပ္ပိယလောက် ဘုရားဒါယကာလောက်ကိုပြော တော်သေးတယ်
သံဃာတော်ကို လှူတဲ့အလှူကို လောကီနည်းနဲ့လာတွက်ပြနေတယ်
ဒယ်အိုးထည်း ရောက်သွားမယ် ဘာမှတ်သလဲ
ဟင်းဟင်းဟင်း ( angry : သွားများကို အစွမ်းကုန်ဖြဲထားသည် )
ရည်စူးအလှူဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဒေသကို ရည်စူးပြီးလှူတဲ့ အလှူပစ္စည်းကို
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်က အလှူကို လက္ခံပြီး ပစ္စည်းကို ဒေသ ပြောင်းလိုက်တာဟာ
ဆိုခဲ့ပြီးသလို ဒီကျောင်းဆောက်ဘို့ လှူထားတဲ့ပစ္စည်းကို
ထိုကျောင်းပါ အချောင် အာဝါသ အာပတ်တွေဘာတွေ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အာပတ်တွေရော အံဖတ်တွေရောပြည့်နေတာမို့
အဲ့ဒါ သက်ဆိုင်ရာ လောကုတ္တရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အလုပ်ဘဲ
စစ်ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ဝိနည်းပညက်တဲ့ မင်းတို့ ကွန်မြူနစ်တပည့်တွေအကြောင်း မသိရင်ခက်မယ်
အလှူပေးသူက နောက်လိုက် အလှူခံသူက ခေါင်းဆောင်လေကွာ
မင်းတို့တွေက မလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သဘောကို လိုက်ဖုံးကွယ်နေတာဘဲ
ဒီလိုဆို မင်းတို့တွေက ဘာတွေလည်း
မင်းတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာ ဘာဖြစ်လို့ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖွဲ့ဝင်တွေရှိရတာလဲ
မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ငါသိတယ် ငါတတ်တယ်ဆိုပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်နေတာဘဲမဟုတ်ဘူးလား
မင်းတို့ကွန်မြူနစ်သဘောအတိုင်းဆို အားလုံးခေါင်းဆောင် အားလုံးနောက်လိုက်လုပ်ပါလား
နောက်ခါ ပြောခြင်ရင် လိုင်းခွဲပြီးပြော
နိုင်ငံရေးမှာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်တာ သဘောကျပါတယ်..
ရဟန်းသံဃာတော်တွေမှာ ပြည်သူလှူတာစားရတဲ့အတွက် ဒီလို မငြိုငြင်ရအောင် မြတ်စွာဘုရားက ၀ိနည်းတွေနဲ့ ပညတ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ သံဃာတိုင်း ၀ိနည်းနဲ့ ညီတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမဲ့ ၊ ဘုရားစကားကို တကယ်လိုက်နာတဲ့ ဘုရားသားတော်တွေ အများကြီးပါ..ဒီလို ဆရာတော်တွေကသာ လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေမပေးဘူးဆို မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေနဲ. ဝေးလို. နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲ အရမ်းကို အလှမ်းဝေးသွားမှာပါ..
သဓ္ဓါထက်သန်လို. လှူပြီဟေ့ ဆိုရင် ဘုရားနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ ထားရတဲ့ သံဃာကို လှူတယ်လို့ ရည်မှန်းပြီး တစ်ခါတည်းသာ စိတ်ဖြတ်ပြီး လှူလိုက်ပါ.. နောက်မှာ ဘာလုပ်လုပ်။..ပုထုဇဉ်မို့ ဘယ်သူမှ စင်းလုံးချော အပြစ်မကင်းဘူး..ကိုယ်လှူတဲ့ ကိုယ့်အလှူ ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တာမို့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို Judge လုပ်မနေပါနဲ့တော့..
ဘုန်းကျော် နဲ့မြင့်ရွှေ ရဲ့ ပို့ စ် တွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ထိုင်း မှာ နေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းကတော့ အတော် မခံ မရပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံပါ ပဲ။ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ က လူတွေက ဘာသာ သာသနာကို မကောင်းဝေဖန် ရင် အကျိုးအကြောင်း သိပ်မကြည့်ပဲ အရင်ဆုံး မခံ မရပ် နိုင်တာက စတာပါပဲ။ ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံ မှာတော့ ဘုန်းကြီးတွေ မကောင်းတာ လဲ တော်တော် များများတွေ့ဖူးပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို သေချာ လေ့လာ ကြည့်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ ၊ သာသနာ ဘောင် ၀င်ဖို့ ဆိုတာ အလွန့် ကို ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ၀ိနည်း တွေ စည်းကမ်းတွေကို လေ့ လာကြည့်ရင် လဲ သာမန် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့လိုက်နာ ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
တစ်ခါက စဉ်းစား ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ၊ မင်းကွန်းဆရာတော် နဲ့သာမည ဆရာတော်နဲ့ ဆက်စပ်လို့ပေါ့၊ အဲ့ဒီတုံး ကသွားလိုက်ကြတဲ့ ဘုရားဖူးတွေ နေ့ တိုင်း ပွဲတော် ကြီးတစ်ခု လို ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘုန်းကြီး ဆိုတာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ ရှိနေရဲ့ သားနဲ့ ဘာ လို့ဒီ ဆရာတော်တွေ ဆီကိုသွားကြသလဲ လို့ စဉ်းစား ကြည့်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီ ဆရာတော်တွေရဲ့ အကြောင်း အတ္ထုပ္ပတ္ထိ တွေ ဖတ်ကြည့်မှပဲ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ ကျွန်တော် တောင် မသွားဖူးလိုက်မိတာ ကိုယ့်ကိုယ်တောင် နောင်တရမိတယ်။
ထိုင်းမှာ တော့ တီဗွီ ချယ်နယ်တွေက လွတ်လပ်တော့ သတင်းတွေ ထဲမှာ ဘုန်းကြီး ပျက်စီးတာတွေ တော်တော် ကြည့်ဖူးတယ်။ တစ်ချို့ ဘုန်းကြီးတွေက တော်တော်လေး နာမည်ကြီး ( ဘုန်းကြီးတယ်ပြောချင်ပြောပေါ့) တဲ့ထဲပါတယ်။ ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေ မိန်းမ နဲ့ အိပ်တာတို့၊ မိန်းမယူထားပြီးကလေးမွေးထားတာတို့( ဖရာ့ယန်တရာ ၂၀၀၁-၂)၊ မူးယစ်ဆေးေ၇ာင်းတာတို့စုံနေတာပဲ၊ထိုင်း သတင်းမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။ စဉ်းစား ကြည့်တော့ အဲဒီဘုန်းကြီး မျိုး ဆိုရင် ငါးပါးသီလ မြဲတဲ့ သာမန် လူတစ်ယောက်ထက် ”ဘုန်း” ကြီး ပါ့မလား။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာဗျာ..။ ဒက်ထိပါဘဲ။ ဘုန်းကြီး တွေ ‘ဘုန်း’ကြီးတာလဲ လူတွေဖျက်ကြလို့ဘဲမဟုတ်လား။ ကက်သလစ်ဘာသာမှာ ဘုန်းကြီးတွေ မတော်တရော်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြည့်ပြီး၊ တလောက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်က ပြောပါတယ်။ တို့ မြန်မာ ဘုန်းကြီးတွေမှာဒီကိစ္စကင်းတယ်ဟေ့ လို့ ဆိုတော့…မောင်မိုးညို မြန်မပြည်တလွှားဝန်ထမ်းဘ၀နဲ့ အမြို့မြို့အရွာရွာရောက်တော့၊ ရွှေသဃာန်းရုံ ကိုယ်တော်ကြီးတွေ ရစရာမရှိအောင် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေ တွေ့ရကြုံခဲ့ရတာတွေ။ သာထွန်းပြန့် လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတော်က စရိတ်ပေးစေလွှတ်ထားတဲ့ ဘွဲ့စုံရကိုယ်တော်တွေ ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြတာတွေ တွေ့ရတော့ သြချမိအောင် အံ့သြမိပါရဲ့။ ပြောချင်တာက ဒီကိစ္စတွေ isolated မဟုတ်ဘူးနော် ဆိုတာကိုပါဗျာ…။
မန်းတာလေးတွေ ဖတ်ပီး ဗဟုသုတ ယူ ပါတယ်..
နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ရေးသွားတာလေးတွေ မန်းသွားတာလေးတွေအရမ်းအရမ်းကောင်းတာဘဲ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြောတာတော့ သိပ်ဘ၀င်မကျဘူးဗျာ မလှူချင်ယင်နေလှူယင်လဲစေသနာသုံးတန်ပြတ်မှလှူသင့်တယ် အလှူခံဘုန်းကြီးကသူဘာသာသူဘယ်နံမည်နဲ့ဘဲပြန်လှူ လှူဒါသူ့အပိုင်းဘဲ ပဟုတ်လာဗျာ…………..
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ” စောက်ကျင့်” တွေပြင်ကြလို့ ပြောခဲ့တယ်။)
သူနဲ့လက်တွဲဖော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလို့ သူကိုယ်တိုင်က တိုင်းပြည်အတွက်
အခုစောက်ချိုးတွေပြင်ကြလို့ ပြောသူကရော တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက်များလုပ်ပြီးပြီလဲလို့ သိချင်စမ်းပါဘိတယ်။
ဆက်တက်လာသော ဆွေးနွေးချက်များအား ကူးယူဖေါ်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။
date	Sat, Jul 30, 2011 at 7:06 PM
အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့ ခင်ဗျားပြောတာတွေကို ကျနော် သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (တစ်ရက်ခြင်း ၀င်ငွေ) တွေ မှားနေလို့ ပြင်ပါရစေ၊ ဘွတ်ရ်ှလက်ထက်က သမတရဲ့တစ်နှစ်တာ လစာဟာ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ (လေးသိန်း) ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ရက်တာ လစာက ဒေါ်လာ ၁၀၉၅ ဒေါ်လာ လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ယာလန်ဝန်ကြီးချုပ်က တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၃၄၀၀၀ ရတဲ့အတွက် တစ်ရက်ကို ၁၁၈၀ ကျော် ရပါတယ်။ သူက အများဆုံးရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားပါ။ သိပ်အရေးကြီးလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နဲနဲ အရေးပါတာတွေဖက် လှည့်ကြဦးစို့။
ခင်ဗျားပြောတဲ့အထဲမှာ ဘုန်းကြီးကို အာဏာရှင်လို့ စွဲချက်တင်ထားတာဟာ မှန်တော့ မှန်တယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအာဏာရှင်ဘုန်းကြီးတွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ နောက်လိုက်စစ်စစ်တွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပိဋကတ်မြန်မာပြန်တွေ ဖတ်ကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓခေတ်က ရဟန်းစစ်စစ်တွေ လူတွေရဲ့ ဟိုအရေး ဒီအရေးတွေထဲ ၀င်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တရားတော် ကျနော်တော့ မတွေ့ဖူးဘူး။ ၀င်ပါတဲ့ ရဟန်းဆိုးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးတော့ ၀ိနည်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်လာရတဲ့သဘောပဲဗျ။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် ရှင်ဇနကာဘိဝံသကတော့ ရဟန်းဆိုတာ ၀ိနည်းနဲ့ နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေရဲ့ အရေးမှာ ၀င်မပါကြနဲ့လို့ တားမြစ်သဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (Political Legacy of Aung San) တို့ ဦးနု (ငါးနှစ်ရာသီ ဗမာပြည်)တို့ကလဲ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်မပါသင့်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို ကျကျနန စည်းခြားရမယ်လို့ ဟောခဲ့ပြောခဲ့ဖူးသဗျ။ နောက်တစ်ခုက ဘာသာရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် မသိတဲ့ လူတွေက ဘုန်းကြီးတွေကို အာဏာရှင်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ၊ လုပ်ခိုင်းထားတာလဲ ပါတယ်ဗျ။ ဘုန်းကြီးဆိုတာ လူတွေရဲ့ စားဦးစားဖျားကို အလကား စားရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဗျ၊ အဲလိုစားပြီး သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲက ထွက်နိုင်အောင် ကျားကုတ်ကျားခဲ မကျင့်ရင် အရှိန်တညီးညီးနဲ့ လောင်မြိုက်နေတဲ့ သံတွေသံခဲကို စားမြိုရတာနဲ့ တူသတဲ့။ ခုခေတ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့ ဒါတွေဟာ အပလာတွေပါ ဖြစ်ကုန်ကြပြီဗျို့။ ထမင်းဆိုင်မှာ ၀င်စားနေကြပါရောလား။
အဲ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ မပေါများသင့်တဲ့ အမျိုးအစား ၄ ခုရှိမယ်ဆိုရင်၊
၂။ လူနာ၊ ရောဂါသည်
မြန်မာပြည်မှာက ရဟန်းအစစ်ကနည်းပြီး ဘုန်းကြီးအောင်ကြံဖန်နေတဲ့ ကြီးပွားအောင်လုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးက အတော်များလာနေသလိုပဲ။ လူမှုရေးဝင်လုပ်၊ နိုင်ငံရေးဝင်လုပ်နဲ့ နေရာတကာမှာ သြဇာထူထောင်နေကြတာ များတယ်။ ကျနော် အကုန်သိမ်းကြုံးပြီး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပရိယတ္တိဖက်မှာ ကြိုးစားနေတဲ့ ရဟန်းတွေ ရှိသလို၊ ပဋိပတ္တိဖက်မှာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ ရဟန်းအနည်းငယ်လဲ ရှိပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ ဘယ်ဖက်မှ ထိထိရောက်ရောက် မလိုက်ပဲ၊ အချောင်နေနေတာတွေ ကျနော်တို့လို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ စာသင်အံခဲ့ဖူး၊ ရှင်ဖြစ်ဖူး၊ ပဉ္ဇင်းတက်ခဲ့ဖူးသူတွေ သိပါတယ်။ ဖာသိဖာသာနေရင်း နောက်ဆုံးတော့ သေကုန်ကြတာ၊ ဒီနေရာမှာ အဲလိုဘုန်းကြီးတွေသေရင် ဘာဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အတတ်မသိနိုင်တဲ့အတွက် “ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တယ်” လို့ မရေးပဲ သေတယ်လို့ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ “ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူတယ် မူတယ်နဲ့ ဘ၀ငရဲ သျှိုးနေကြတာတော့ လူတွေက မသိကြဘူး” လို့ မိန့်ဖူးပါတယ်။ ငွေကြေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေတာတွေကိုလဲ ပိဋကတ်တော်လာ သုတ္တာန်ဒေသနာတွေနဲ့ ယှဉ်ဟော ဆုံးမသွားတာ ဖတ်မှတ်ရဖူးပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပဲ မဟုတ်လား၊ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားမတတ်ပဲ သာသနာလာပြုတယ်ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ စကားမတတ်လို့ မဟောနိုင်တာထား၊ အကျင့်နဲ့ လက်တွေ့ပြပြီး တရားအားထုတ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးဆိုတာ ခင်ဗျား ကြားဖူးလား၊ မြင်ဖူးလား။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအတွင်းမှာ တကယ်ကျင့်ရင် တကယ်ဖြစ်တယ်၊ သန္နိဋ္ဌိကော၊ အကာလိကောတဲ့ လက်တွေ့သာကျင့်ပါ၊ အကျိုးပေးက အခါမလင့်ဘူးတဲ့။ ၁၉၄၀ တစ်ဝိုက်က ကြားရ၊ ဖူးလိုက်ကြရဖူးတဲ့ စွန်းလွန်းဆရာတော်တို့ ညောင်ရမ်းဆရာတော်တို့လို မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတဲ့ ဘုန်းကြီးဆိုတာ ခင်ဗျား ကြားဖူးထားတာရှိရင် ဗဟုသုတအဖြစ် မှတ်သားချင်လို့ စာရင်းတို့လိုက်စမ်းပါဗျာ။ တရားကို မစို့မပို့ တောရပ်မှီးပြီး အားထုတ်ပြပြီး၊ မကြာဘူး နယ်လှဲ့တရားဟောမယ်၊ စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ်ရေးမယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ဘုန်းကြီးသူဌေးတွေ ပေါလာတာပဲ။
အဲ၊ မဟုတ်ကဟုတ်က ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က မျက်လှည့်ဆရာတွေလို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်ရွတ်တာနဲ့ ရေဆူတာတို့၊ အပ်ချည်မျှင်လေးနဲ့ ထီးတော်တင်တာတို့ စတဲ့စတဲ့ ပေါက်ကရလေးဆယ် လုပ်စားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေသာ ရှေ့တန်းရောက်တဲ့နိုင်ငံဟာ အင်မတန်မှ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံပဲဗျို့။ အဲဒီလိုသာ အမှန်စွမ်းခဲ့ရင် စစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချတာမျိုးက ဘုန်းကြီးမို့ မလုပ်ကောင်းလို့ မလုပ်သွားဘူးပဲထားပါ၊ ဆင်းရဲသားတွေ ထမင်းနပ်မှန်အောင်၊ ရောဂါသည်တွေ၊ နာတာရှည်တွေ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျရောဂါသည်တွေ ကင်ဆာဝေဒနာသည်တွေ ပြန်ကျန်းမာအောင်တန်ခိုးပြတာတွေဘာတွေလဲ ဘာမှ လုပ်သွားတာ မကြားရပါလား။
နောက်တစ်ချက်က ဘုန်းကြီးဆိုတာ ပရိက္ခရာရှစ်ပါးနဲ့ အမိုးအကာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်း အသင့်အတင့်ကလေးရှိရင်ကိုပဲ လုံလောက်တယ်။ ပိုက်ဆံကိုင်ပြီး သုံးဖို့ မြတ်စွာဘုရားက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ပရိက္ခရာရှစ်ပါးထဲမှာ သပိတ်တစ်လုံးပါတာဟာ အလှူခံစားဖို့ တနည်းပြောရရင် တောင်းစားဖို့ပဲဗျ။ ချက်စားရတဲ့အရာများကို အလှူမခံရသလို၊ နေ့ဖို့ညစာအတွက်လဲ မသိုမမှီးကောင်းဘူးဆိုတာ ၀ိနည်း ကကြီးခခွေးပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ အခုတော့ ပိုက်ဆံတော့ သိပ်မကိုင်သူလဲ မကိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ဘဏ်ကဒ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ မန်းနီးကဒ် စသဖြင့် ကိုင်ပြီး ၀ိနည်းရှောင်နေကြပုံပဲဗျ။
ဘုန်းကြီးတန်မဲ့ ကျောင်းလုကြတာ၊ တရားတစ်ဘောင်ဖြစ်ကြတာ သူတို့မို့မရှက်ကြတာဗျာ။ အစိုးရများကလဲ အဲလိုဘုန်းကြီးတွေကို ၀ိနည်းအရ ဘယ်လိုအရေးယူသင့်တယ်ဆိုတာ ဆရာတော်များကို အပ်ပြီး ကျကျနနစိရင်ပစ်သင့်တယ်ဗျာ။ တဆက်တည်း နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ဝင်ပါနေတဲ့ ဘုန်းကြီးမှန်သမျှကိုလဲ ၀ိနည်းအရ ဘယ်လို အာပတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ရှင်းအောင်ကြေငြာပြီး ပေးနိုင်သမျှ အပြစ်ကို ပေးပစ်ရမယ်ဗျား။
ဗုဒ္ဓခေတ်က ရဟန်းဘောင် ၀င်တယ်ဆိုတာ သံသရာကို ငြီးငွေ့လို့၊ အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို ရချင် ရောက်ချင်လို့ဗျ။ အခုဟာက လူတွေ ရှိခိုးတာ ခံချင်လို့၊ အချောင်စားချင်လို့ လို့ ပြောရမှာပဲဗျာ။ ခင်ဗျားပြောသလို ဘုန်းကြီးတွေ ဒီလောက်များနေတာ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်အားဆုံးရှုံးရုံ၊ အလကား တရိုတသေ ကျွေးထားရရုံတင်မဟုတ်ဘူးဗျာ၊ ဆန်ကုန်မြေလေးလူတန်းစားတစ်ရပ်ကို မွေးထုတ်ထားသလို ဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်ပြောတာ ပဋိပတ် ပဋိယတ် ကျားကုတ်ကျားခဲ မလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးယောင်တွေနဲ့သာဆိုင်ပြီး အမှန်တကယ် တရားအားထုတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့ နားလည်ကြပါ။
ဒေါ်စုရဲ့ ၀င်ငွေတွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းချီနေတာတော့ မှန်တယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ အထောက်အထားပြပါဆိုရင် မပြနိုင်ပေမဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ သိက္ခာ သမာဓိကို ကျနော် ယုံတယ်။ စကေားလားရှစ် ဖောင်ဒေးရှင်းတွေလဲ လုပ်ကိုင်နေတာ ကြားဖူးတယ်။ တစ်နေ့မှာ ရှင်းရမယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုလဲ မသိပဲမနေပါဘူး။ ကျနော်က ဒေါ်စုကို အကုန် မထောက်ခံပါဘူး။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးဖက်မှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ပါတောင် မပါစေချင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တလွဲတွေချည်း လုပ်နေလို့လို့ မြင်နေလို့။
ဥပမာဗျာ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ပိတ်ပင်ဟန့်တားခဲ့မှုမျိုး၊ ဒါဗို့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ညီလာခံမှာ “ကျမတို့နိုင်ငံ ဆင်းရဲမွဲတေပြီး ပြည်သူတွေ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ လာကြပါ၊ ဟောဒါ ဟောဒါတွေကိုတော့ ထိန်းပေးကြပါ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါလို့ ပြောပြီး သုံးရက်လောက်ပဲခံတယ်၊ အနောက်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေ မရုပ်သိမ်းကြပါနဲ့လို့ တစာစာ ဖြစ်ပြန်ရော။” ဒါက တစ်ချက်။
ဒိထက် အရေးကြီးတဲ့အချက်က ပါတီကို ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကနေ ဦးဝင်းတင်နဲ့အတူ (စစ်အစိုးရအလိုကျ) ဆွဲချခဲ့ရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ ခွဲထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူတွေကို ပြည်သူက မဲမပေးအောင် လှည့်ပတ်ပြောဆိုခဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒိအတွက် လွှတ်တော်ထဲကို အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ပဲ ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေက ဘာကို ပြသလဲဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်၊ အရပ်သားအာဏာရှင် နိုင်ငံအတော်များများ ဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသလဲဆိုတာ မလေ့လာထားတဲ့သဘော၊ သင်္ခန်းစာမယူနိုင်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ အတိုချုပ်ပြီးပြောရရင် တကယ်လို့ မြန်မာပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီအတော်အတန်ပြည့်ဝတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အနှစ် ၂၀ ပိုကြာသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒါ အဓိကအားဖြင့် ဒေါ်စုနဲ့ ဦးဝင်တင် (စုဝင်းဂိုဏ်း) ရဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုကြောင့်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့်လဲ ကုလအတွန်းဝန်ချုပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် နမ်ဘီးယားက ပထမအကြိမ် ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံရာမှာ “ဒေါ်စုဟာ ခေါင်းမာတယ်၊ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ကင်းကွာနေတယ်” လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်သလို၊ အကြမ်းမဖက် ဒီမိုကရေစီ ဂုရုတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ပါမောက္ခ ဂျင်းရှပ်က “ဒေါ်စုဟာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာခေါင်းဆောင်သာ ဖြစ်တယ်၊ သေနင်္ဂဗျူဟာမှူးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြောင်းလဲအောင် မလုပ်နိုင်တာ” (ဧရာဝတီအင်တာဗျူး) လို့ သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဘယ်ပါတီကဖြင့် စေတနာသန့်တယ်၊ ဘယ်ပါတီကဖြင့် စေတနာမသန့်ဘူး ခွဲနေစရာမလိုဘူး၊ နိုင်ငံရေးပါတီက ခုလို ငွေချေး ကျောင်းထောင် ဆေးကုစတာတွေ လုပ်တာဟာ ဦးနုစကားကို ငှားပြီးပြောရရင် အောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးစတန့်တွေပဲဖြစ်တယ်၊ ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၊ ဘယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ပါတီမှာမှ မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကြိုတင် မဲဆွယ်တဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ အတိုချုပ်ပြီးပြောရရင် အဲလိုလူမှုရေးတွေ လုပ်ချင်ရင် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့အစည်းထူထောင်ပြီး လုပ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးကိုပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို သာမာန်အရပ်သားတွေကို လုပ်ခိုင်း။
ဒ်ါစုအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တစ်စုံတစ်ရာ ထိထိရောက်ရောက် မသေခင် လုပ်ပေးသွားချင်ရင် နိုင်ငံရေးအိပ်မက် မက်နေဖို့ အချိန်မဟုတ်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ထူထောင်ပြီး လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတာတွေကို စောက်ချလုပ်ဆောင်ရင် တခြားလူတစ်ထောင် တစ်သောင်း ပေါင်းလုပ်လို့တောင် မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုးရမယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် တိုင်းပြည်မြန်မြန်တိုးတက်မယ်၊ မြန်မြန်ဒီမိုကရေစီဖြစ်မယ်၊ မြန်မြန်အေးချမ်းမယ်၊ အဲဒီအလုပ်ကို ဒေါ်စုလုပ်မယ်၊ ကျနော့်ရဲ့လုပ်အားကလဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် ထမင်းစား ကျွန်ခံအဆင့်နဲ့လဲ အတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ချင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
date	Sat, Jul 30, 2011 at 8:03 PM
ခင်ျေားကတော့ ဘုန်းကြီးပညာကို တတ်ထားတော့ -သဒါတရားနဲ့ တဏှာ တလမ်း
ပညာနဲ့ ဒေါသ ဆိုတာ တလမ်း ဆိုတဲ့ အတိုင်းဘုန်းကြီးမစစ်တာတွေ့တော့လည်း ဒေါသ မကင်းဖြစ်နေတာ ပြီးတကယ်အမှန်အကန် ဘုန်းကြီးရှိတာကို သိခြင်း လက္ခံခြင်းကြောင့်လည်း
မဟုတ်မခံ အပြုသဘောနှင့်ဝေဖန်တာကို လက္ခံပါတယ် တရားလေ့လာမှု မရှိ ဘဲုဝါ၀ါ မြင်တိုင်း
ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲ နေခြင်းဟာ ပြည်ပရောက် နေသူ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းထဲ ပါဝင်နေသူအဖို့
မသင့်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် လူမျိုးရေး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများသည်ပင်
မလိုအပ်ဘဲ အပြစ်တင် ရှုံ့ချ နေကြလျှင် အားလုံး ညီညွတ်ရေး စုပေါင်းတော်လှန်
ရေး ပြောနေကြခြင်းအတွက် ဆူးညှောင့် ခလုတ်တွေပါ။
ဦးညွန့်ရွေ ရဲ့ မပေါများ သင့်တဲ့ အရာ လေးမျိုးဆိုတဲ့နေရာ မှာ ဘုန်းကြီးပါ တမျိုးပါနေတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံး အနှစ်-ငါးဆယ် စစ်အာဏာရှင် အောက်မှ လူတွေ ဆင်းရဲ မွဲတေ ပြီးစားရမဲ့
သောက်ရာမဲ့ ရှေ့ပြေး သေတာဘဲ ကောင်းလေစွ ဆိုသော ဘ၀ မှာ -ဘုန်းကြီးလုပ်သူများလာတာ
ဖြစ်နိုင်သလို -ဒုက္ခဖြစ်လျှင် ဘုရားတ ဆိုသလို -ဒုက္ခဖြစ် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုမှ ကြံရာမဲ့
သူများ နေမထူး သေမထူး ရဟန်းဝတ် ကျောင်းကို ပြေး သော ဘ၀ အတွက်ကော မျှမျှတတ
လူတိုင်းကိုလည်းကိုယ်သိသလို ကိုယ်နားလည်သလို သိရမယ် ဖြစ်ရမယ် လို့ မထင်စေခြင်ပါ။
အားလုံးဟာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ခွင့် ရေးသားနိုင်ခွင့်ကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြုသဘော
ပါမပါ ဘယ်လိုနည်းနှင့် နှောက်နေခြင်း။ ပြုနေခြင်းကိုတော့ ဆန်ကျင် ရှင်းလင်းချင်တဲ့ သဘောရှိလို့ပါဘဲ
သူသူ ငါငါ အမှန်ကိုတော့ လက္ခံတတ်ပြီး အေးငြိမ်းခြင်းများ ဖြင့် သွားကြလိုတာ အမှန်ပါဘဲ။
date	Sun, Jul 31, 2011 at 6:42 AM
ညီမလေးကတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေ ဘာမှ နားမလည်တော့ မပြောလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ညီမလေးတို့ တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကလည်း
ညီမလေးတို့ ကိုးကွယ်နေတယ့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ
့သားတော်တွေပါ။ အတုယောင်တွေ . အစစ်အမှန်တွေဆိုတာက အမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေတယ့်
တရားတွေလေ။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးလို အတုမရှိတယ့် သံဃာတော်တွေ ရှိသလို ၊
ကိုဘုန်းကျော်ပြောတယ့် အတုတွေလည်း ရှိမှာပါ။ အဲတော့လေ ညီမလေးပြောချင်တာက
သူတို့ တု တာ မတု တာ သူ့ တို့ အကြောင်း ၊ ကိုယ်တွေက မစော်ကားသင့်တာ
ကိုယ်တွေအကြောင်းလေ၊ ပြီး နောက်တစ်ခုက ဘုန်းကြီးတွေဟာ အပိုတွေ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုဘုန်းကျော်။ လောကကြီးအတွက် တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ
့နှလုံးသားကို နူးညံ့စေနိုင်တာ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်တွေပါ။
ဒီတရားတော်မြတ်တွေကို ညီမလေးတို့ လူတွေအနေနဲ့ ရှာဖွေပြီးမဖတ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီသံဃာတော်တွေက ဖြန့်ဖြူးပေးမှသာ နာကြားခွင့်ရှိတာပါ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဘာသာတရားသာမရှိရင် နိုင်ငံတော်ကြီး
ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေတစ်ခုတည်းနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်
ထောင်ထဲမှာလူတွေပြည့်နေမှာပေါ့။ အဲဒီအခါ ဒီထောင်သားတွေရဲ့ ထမင်းစရိတ်ကို
ပြည်သူတွေကပဲ ကျခံပေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူးလား။ လူသားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်
ညှာတာစိတ်တွေသာ မွေးမြူပေးနိုင်မယ်ဆို ရာဇ၀တ်မှုတွေ နည်းသွားမယ်လို
့ညီမလေး အလေးအနက် ယုံကြည်ပါတယ်။ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေနည်းသွားလို့ ရှိရင်
ထောင်သားတွေနည်းသွားမယ် မဟုတ်လား။ ထောင်သားတွေနည်းသွားလို့ ရှိရင်
ထောင်သားတွေကို ကျွေးမွေးရတယ့် စရိတ်နည်းသွားမယ် မဟုတ်လား။ ပြီးတော့
သူတို့ ရဲ့ လုပ်အားတွေပိုထွက်လာလို့တိုင်းပြည်အတွက် ၀င်ငွေကို
ပိုရနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား အစ်ကိုရရ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသားတော်ရဟန်းတွေဟာ
နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အပိုတွေ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို။
date	Sun, Jul 31, 2011 at 2:37 PM
Everyone has ofcourse the rights to responsibly speak their minds.
But, we should remember that free speech has boundary. Free speech should be limited for reasons of democratic equality. It should also be limited when conflicting with other rights.
date	Sun, Jul 31, 2011 at 5:33 PM
ကိုဘုန်းကျော် ဘယ်လိုပြန်ရေးမယ်တော့ မသိဘူး၊ ကျနော့်ဆီရေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာလေးတွေရှိလို့၊ မဇင် စဉ်းစားစေချင်တာလေးတွေရှိလို့ ကြားက၀င်ရေးလိုက်တာပါ။ ကျနော်ပြောတာကို သဘောမတူလဲ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားတော့ ကြည့်ပါ။
ဘုန်းကြီးတွေ များလာတာနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုခင်းများ ကျသွားရရင် မြန်မာပြည်က ရဲဌာနတွေ ရဲသားတောင် သိပ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ထောင်ကျတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားများပြားလာတာ မြန်မာပြည်လို ဆင်းရဲမွဲတေပြီး အစိုးရမကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတော့၊ အစိုးရမကောင်းတော့ ပညာတတ် နည်းတယ်၊ ခိုးဝှက်တဲ့သူ၊ လာဘ်စားတဲ့သူတွေက တစ်နေ့တစ်ခြား များလာတယ်။ ဒါ အတိုချုပ်ပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်က ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားက “ငါ၏ချစ်သား ရဟန်းများတို့” ဆိုတာ ကျနော်တို့လဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားနာ ဖတ်မှတ်လာတာပါ၊ တကယ်ကတော့ အပိုတွေထည့်ပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့လို့ ခုလိုအစွဲတွေနဲ့ ဘုရားသားတော်တွေကို ပြစ်မှားဖို့မပြောနဲ့ စောဒကတက်တာတောင် ဘုန်းကြီးတင်မဟုတ်ဘူး၊ ၀န်းကျင်က လူတော်တော် များများကပါ မကြိုက်ကြဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ပြောတဲ့ အာဏာရှင်ဘုန်းကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ “ငါ၏ ချစ်သား ရဟန်းများတို့” ဆိုတာ ပါဠိလို “ဘိက္ခဝေ” လို့ မြတ်စွာဘုရားက ခေါ်တာကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ၊ အဲဒီထဲမှာ သားဆိုတာ မပါဘူး၊ ငါ ဆိုတာ မပါဘူး။
ဘယ်လို ဘုန်းကြီးတွေကို အပြစ်တင်ရင်၊ စောဒကတက်ရင် အပြစ်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုဘုန်းကြီးတွေကို မပြစ်တင်၊ စောဒကတက်ရင် အပြစ်မဖြစ်ဘူး၊ တင်ထိုက် တက်ထိုက်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောထားတာ ရှိမရှိ၊ မဇင်အနေနဲ့ ပရိယတ္တိကျွမ်းကျင်တဲ့ သံဃာတော်တစ်ပါးပါးကို ချဉ်းကပ်ပြီး မေးလျှောက်ကြည့်ပါ။ အချိန်ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိဋကတ်မြန်မာပြန် ဒီဃနိကာယ် လောဟိစ္စသုတ်ထဲက အပြစ်တင်ထိုက်တဲ့ ဆရာသုံးမျိုးနဲ့ အပြစ်မတင်ထိုက်တဲ့ ဆရာသုံးမျိုးအကြောင်းကို ယောနိသော မဏသီကာရနဲ့ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးရင်လဲ ဆင်ခြင်သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ကတော့ ရဟန်းကိစ္စမပြီးပဲ (တနည်း တရားကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပြီး တရားမပေါက်သေးပဲ) တရားဟောရင် အပြစ်တင်ထိုက်တယ်တဲ့။ မဂ်လေးတန် ဖိုလေးတန်အောင်ပြီး သံသရာက အပြီးတိုင် လွတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်များ၊ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် သောတာပန်ဆိုက်ပြီး အထက်မဂ်ကို ကျင့်ဆဲပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့ အပြစ်မတင်ထိုက်ဘူးလို့ ကျနော် နားလည်ပါတယ်။
နောက် အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကို ထောက်ပြပါရစေ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးသုတ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကာလမသုတ်ကို မမေ့ပါနဲ့လို့ မှာပါရစေ၊ ဗုဒ္ဓရှင်တော်လို သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စကားသော်မှ ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ဟပ်ကြည့် ကျင့်ကြည့်ပြီး ကောင်းရင်ယူ၊ မကောင်းရင် ပစ် လို့ ကိုယ်တော်တိုင် လမ်းညွှန်ပါလျက်နဲ့ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေကို အပြစ်တင်စရာရှိရင် တင်ထိုက်တယ်။ ခြုံပြောရရင် ပြည်သူတွေက စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ ကျွေးထားတာ၊ ပြည်သူတွေမှာ စိစစ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝေဖန်ခွင့်၊ ရဟန်းဘောင်ကနေ မောင်းထုတ်ခွင့်တောင် ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုတ္တိဗေဒနဲ့ သုံးပြီး စဉ်းစားတောင် နားလည်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။ ဘုန်းကြီးတွေ ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်ပြောရင် ကိုယ့်မှာအပြစ်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ရင် မှားတယ်၊ အပြစ်တင်ထိုက် ပြောထိုက်ပါလျက်နဲ့ မတင်ခြင်း မပြောခြင်းကသာလျှင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာတော်ကို ညစ်နွမ်းအောင် လုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို မြှောက်ပေးရာကြပြီး သာသနာကို ဖျက်ဆီးတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လဲ မသိကျိုးကျင် ၀င်ပါနေပါကောလားလို့ အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ မြင်ကြည့်ဖို့ စေတနာနဲ့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အမြင်မှန်ရရင် ကျနော်တို့အတွက်လဲ တအားမို့ပါ။
date	Sun, Jul 31, 2011 at 6:50 PM
မှန်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ ရစေဖို့ပါဘဲ။
လွတ်လပ်စွာ ရေးကြပြောကြ ဝေဖန် အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ဖို့ပါဘဲ။ လူသား၏ ယဉ်ကျေးသော
စည်းဝိုင်းတခုထဲ မှာ ၀င်ရောက်လာခြင်းပါဘဲ။ အကြမ်းဖက်မှု ရမ်းကားမှု တွေကို စွန့်လွှတ်
ကြပြီး အေးဆေးစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းသည့်အဆင့်ကို ရောက်စေခြင်းပါဘဲ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံး
သူတိုင်း ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို သိလာတိုင်း ပြည်သူလူထု နှင့် အများကို မစော်ကားတော့ဘဲ
လူသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ အယူဝါဒ ကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲနိုင်၍ မည်သည့်လူမျိုး
မည်သည့်ဘာသာ ကိုမှ ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းမလုပ်ကြတော့ဘဲ လူသားမှန်သမျှအား ရိုသေ
လေးစား တတ်သော အသိကို ပေးခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှု လက်အောက်က လွတ်မြောက်စေရေးအတွက် အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတရပ်လုံးညီညွတ်စွာ စုပေါင်းကြစေလိုပါတယ်။
ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာတော်ထည်းက အကြောင်းတွေကို
ဒီလိုသာ လောကီနဲ့တွဲပြီး ဝေဖန်တမ်းဆို
သမ္မာအာဇီဝ = မှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်း
ဒါတွေဟာ လူတွေလည်း လိုက်နာရမှာဘဲ
ယ္ခု လက်ရှိ ရဟန်းတွေ ငွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုင်တာတွေကို ဝေဖန်နေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုကျုပ်မေးမယ်
ခင်ဗျားတို့ရော မှန်ကန်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဲ့လား
( ခင်ဗျားတို့ ပြည်ပကို ဘယ်လို စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖြည့်ပြီးသွားလည်း
မမှန်မကန်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ပြည်ပရောက်တယ် အလုပ်လုပ်တယ်
ရတဲ့ဝင်ငွေဟာ သန့်ရှင်းမလား )
ကိုယ်ကတော့ ဘာသီလမှမရှိဘဲနဲ့ သူများကို ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ သေခြာလည်း ဆင်းစားဦး
ကိုယ့်နေရာကိုယ်နေပြီး လုပ်ကိုင်ဝေဖန်ကြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်
မိုးဂျိုးပွတ်ပြီး မြေမျိုဂုဏ်မယ် ဘာမှတ်သတုံး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရွှေကြီးမျိုးကြီး ကလားဇာတ်ခင်းတာ ဝါသနာပါရင်
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆီသန့်သန့်လေးနဲ့ ဒယ်အိုးအသစ်ကလေးယူသွား
ဟိုရောက်ရင် ဆီဟောင်းတွေနဲ့ အကြော်ခံနေရမှ
ဆီအဟောင်းတောင်မှ စားအုန်းဆီ ဟောင်းဖြစ်မယ်…..
အကြော်ခံအောင် ပလပ်စတစ်ရေဘူး ထဲ့ကြော် ထားတဲ့ဆီဗျ….
– ပြောချက်ကြီးတွေက သောက်ရမ်းလန်ထွက်နေတယ်
– ကြောက်ခမန်းလိလိပဲ လေးပေါက်ပြောသလိုလေးလဲ မေးလိုက်ချင်တယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖိုးတန် အသိဥာဏ်တွေ။
ပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး update ဖြစ်တာတွေ ကျနော်စောင့်နေတယ်
တင်ပေးပါအုံး သဂျီးမင်းဗျို့ ………..
တခြားစာတွေတော့ .. မပြောတတ်ဘူး..မဝေဖန်ချင်ဘူး..
ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သတ်ပီး .. ရေးထားတာတော့.. နည်းနည်းလွန်နေသလိုပဲ..
မှန်ပါတယ်..မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီး ပေါင်း လေးသိန်းကျော်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်..တကယ့်ဘုရားသားတော် ရဟန်းကော .. ဘယ်နှစ်ပါးရှိလဲ..
ဘုန်းကြီးနဲ့ ..ရဟန်းက မတူပါဘူး .. ရဟန်းတွေက သာမန်လူတွေထက် .. ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားလို့ ..
ဘုန်းကြီးလို့ ခေါ်တာပါ.. ပြောရမယ်ဆိုရင်.. ရှေးခေတ်က ဘုရင်တွေလည်း ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားခဲ့တာပဲ..
အဲလိုပါပဲ.ဘုန်းကြီးတိုင်းရဟန်းမဟုတ်ပါဘူး.. အခုကျနော်ပြောချင်တာက ..
ကိုယ်ပြောချင်တာဖြစ်ချင်တာနဲ့တင်ပဲ.. အကုန်လုံးကို သိမ်းကျုံးရမ်းပြစ်လို့မရပါဘူး…
ဘုရားကို ဝေဖန်ချင်ရင်… ဘုရားရဲ့သမိုင်း ..၀ိပသနာတရားတွေ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ကြိုးစားအားထုတ်
တစ်ချို့ဘာသာခြားတွေ.. (ဗုဒ္ဒဘာသာတွေတစ်ချို့လည်းပါပါတယ်) .. ဘုရားကိုရွှေချပြီးလှူမယ့်အစား .. ငတ်ပြတ်မွဲတေနေတဲ..ဆင်းရဲသားတွေ သွားလှူပါလားဆိုတဲ့သူတွေပေါ့..
အဲဒီလူတွေကိုပြောချင်ပါတယ်.. ဘုရားက လာပါ လာပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျ..
ဒကာ. ဒကာမတွေရဲ့ .. သဒ္ဒါတရားပါ.. ဘယ်သူမှ တားဆီးလို့မရပါဘူး.. ဒါပေမယ့်
မြန်မာလူမျိုးကလည်း မြန်မာလူမျိုးပါပဲ.. ဘယ်နေရာမှမဆ်ို.. အလှူလေးလုပ်တာတောင်.. ပကာသန လေးပါဦးမှ . . သိမ်ကျောင်းဒါယိကာနဲ့ .. ကုဋီ (အိမ်သာ) ဒါယိယာဆိုရင်..လူတိုင်း .သိမ်ကျောင်းဒါယိကာပဲဖြစ်ချင်ကြတာ.. ဘုရားမုခ်မှာလှူမယ်ပဲထား.. နာမည်ကိုပါအောင်ရေးပေးပါ ဆိုတာချည်းပဲ.. ပြောချင်တာက .. လောကအတွက်..သာသနာအတွက်အကျိုးများမယ့်နေရာကို မလှူတတ်ကြပါဘူး .. ပြီးတော့ ..ချဲဘုန်းကြိးတွေ.. ဘာတွေက .. ဘုန်းကြိးတွေပါ.. ဘုရားသားတော် ရဟန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး.. မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးထဲမှာ..သမ္မာအာဇီဝ မဂ္ဂင်ဆိုတာပါပါတယ်.. အဲသမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်ဆိုတာက.. ရဟန်းတွေရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသော .အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက.. ဆွမ်းခံကြွခြင်းပါ.. အဲချဲဘုန်းကြီးတွေကတော့.. ငခုံးမတွေပေါ့..
အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာက..မြန်မာလူမျိုးများ .. အလှူအတန်းလုပ်ရင်… လောကအတွက် အကျိုးများမယ့်နေရာတွေ လုပ်တတ်ကြပါစေ.. မိမိ၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ..သာသနာတော်ကြီး… အထင်သေးခံရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါ..